Kutsvagisa & Kubudirira |
Iwo biomedical mashandisirwo ehydrogen anotarisirwa zvakanyanya neana academia nekuda kwekuchengeteka kwayo pamwe nekugona kwakapamhama-kwakasiyana kushanda. Pachine nyaya zhinji dzakakosha mumunda wehydrogen biology iyo yakakodzera kudzidza. Ini ndinotenda kuti nekudzika kwekutsvaga, vanhu vachazoita ...Verenga zvimwe »
AngelBiss timu inorongawo kuita nehydrogen yakaiswa. Dhizaini yeR & D dhizaini yechigadzirwa chitsva: Hydrogen jenareta. Hydrogen rudzi rwegasi rinotsva mune vanhu pfungwa. Mumakore achangopfuura, vaongorori vakawana yakasarudzika antioxidant mhedzisiro, uye iko kushanda kwekutsvaga i ...Verenga zvimwe »
AngelBiss timu inorongawo kuita ne nitrogen yakaiswa. Dhizaini yeR & D dhizaini yechigadzirwa chitsva: Nitrogen jenareta. Nitrogen haina gasi, isina-chepfu uye isina gasi inert. Naizvozvo, nitrogen inowanzoshandiswa segasi rinodzivirira. Iko kushandiswa kwe nitrogen zvakare iri imwe yeiyo R & D directi ...Verenga zvimwe »
Dhipatimendi reAngelBiss R&D ikozvino rinotarisa kuvandudzwa kwezvigadzirwa zvitsva, uye edza kugadzira zvigadzirwa zvine ruzivo rwepamusoro uye kuita kuri nani. YePortable Suction Machine, AngelBiss ikozvino ichidzidza iyo Double Bhodhoro kugadzirwa, ichave iri nyore uye inoshanda mashandisiro. YeAngelBiss 5L Oxy ...Verenga zvimwe »